Soosaarayaasha & Alaab Maroojiyeyaasha - Shiinaha Warshadda Maroodi
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513500'
Maqaar-iibinta kulul (Udgoon iyo buux dhaaf) Xadhig Qaacid Diy Embroidery Kit isticmaal gacmeed - lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513501'
Maqaar-iibinta kulul (Qaabka loo yaqaan 'bulcade buluug') dunta la tolay ee Diy Embroidery Kit ayaa gacanta loo adeegsaday - oo laga sameeyay daabac saddex geesood leh, gacanta ha u sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513502'
Maro-iibinta kulul (Qaabka loo yaqaan 'pink brocade pink') Thread Embroidered Diy Embroidery Kit wuxuu isticmaalaa daabac gacmeed laga sameeyay saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513503'
Maqaar-iibinta kulul (Qaabka cagaarka cagaaran) Dunta Tilmaamaysan Diy Caanbixiyaha Qalabka isticmaal gacmeed - laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513505'
Maqaar-iibinta kulul (chrysanthemum) Mawduuc dun leh oo Diy Embroidery Kit loo isticmaalo gacmo-gacmeed lagu farsameeyay saddex-cabbir, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513506'
Maqaar-iibinta kulul (Bud ka buuxsan laammo) Xadhig Tilmaameysan Diy Kaba-gacmeed ayaa isticmaala gacmo - lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513507'
Maro-ku-iibinta kulul (Caleen maple gaduud) Dunta lagu tolay Diy daabacaadda Qalabka isticmaal gacmeed - laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513508'
Maqaar-iibinta kulul (Caleenta khariidadda jaallaha ah) Khaanadda Lagu Dhoobay Diy Cawdada Qalabka isticmaal gacmo-sameeye daabac leh oo saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513509'
Maro-ku-iibinta kulul (ubax-bulsheed) Mawjad ku duuban Diy Caanbixiyaha Qalabka isticmaal gacmeed - laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513510'
Maqaar-iibinta kulul (Goobaha ubax) Xadhkaha Diin-daabacaadda Qalabka loo yaqaan 'Diy Embroidery Kit' ayaa loo isticmaalaa gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Hannaan tayo sare leh oo midab leh oo midab leh oo loo yaqaan 'Square Hanky ​​Ladies Handkerchief 513511'